आज मंगलबार ! राशि अनुसार तपाइको लागि आजको दिनमा के के काम बन्छ हेर्नुहोस् - Muldhar Post
आज मंगलबार ! राशि अनुसार तपाइको लागि आजको दिनमा के के काम बन्छ हेर्नुहोस्
धर्मदर्शन २०७४, २५ मंसिर सोमबार 290 पटक हेरिएको
मन फुरुङ्ग हुनेछ । हाँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । विभिन्न अवसरको प्राप्ति हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिने छ । मनग्ये धनलाभ हुनेछ । व्यवसायको सिलसिलामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिने छ ।